Hesekiel 40 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
40 Bere a wɔfaa yɛn nnommum+ no akyi afe a ɛto so aduonu anum, afe no mfiase, ɔsram no da a ɛto so du, kurow no sɛe+ akyi mfe dunan no, Yehowa nsa baa me so+ saa da no ara, na ɔde me kɔɔ hɔ.+ 2 Onyankopɔn anisoadehu mu na ɔde me kɔɔ Israel asase so, na afei ɔde me kosii bepɔw+ tenten bi so. Ná biribi wɔ so te sɛ kurow wɔ anafo fam.+ 3 Bere a ɔde me kɔɔ hɔ no, na ɔbarima bi a ne ho te sɛ kɔbere+ kura siwabiri hama ne demmire+ a wɔde susuw ade gyina ɔpon no ano. 4 Na ɔbarima no ka kyerɛɛ me sɛ: “Onipa ba,+ fa w’ani hwɛ na fa w’aso tie, na fa wo koma si nea mɛkyerɛ wo nyinaa so, efisɛ wɔde wo aba ha sɛ menkyerɛ wo. Na ka nea wubehu biara kyerɛ Israel fie.”+ 5 Na hwɛ, ɔfasu atwa ofie no ho nyinaa ahyia. Ná ɔbarima no kura demmire a wɔde susuw ade basafa asia; basafa biara wɔde bɛyɛ sɛ nsayam ato so. Na osusuw ɔfasu no tɛtrɛtɛ, demmire biako, ne ne tenten, demmire biako. 6 Afei ɔfaa ɔponkɛse a ani kyerɛ apuei+ fam no mu, na ɔforoo ntrapoe no kɔɔ soro. Osusuw ɔponkɛse+ no ase, na na ne tɛtrɛtɛ yɛ demmire biako, na osusuw ɔpon foforo nso demmire biako. 7 Awɛmfo pia no ntwemu yɛ demmire biako na ne tɛtrɛtɛ nso yɛ demmire biako, na awɛmfo mpia+ no ntam yɛ basafa anum; na ɔponkɛse a ɛbɛn abrannaa a ani kyerɛ fie no mu no ase yɛ demmire biako. 8 Na osusuw abrannaa a ani kyerɛ fie no mu no ase, demmire+ biako. 9 Na osusuw ɔpon no abrannaa no, basafa awotwe; ɛho adum nso basafa abien, na na abrannaa no ani kyerɛ fie no mu. 10 Awɛmfo mpia a ɛwɔ ɔponkɛse no ho wɔ apuei fam no, abiɛsa wɔ benkum, na abiɛsa nso wɔ nifa. Abiɛsa no nyinaa nsusuwii yɛ pɛ, na ɛho adum no nso nsusuwii yɛ pɛ wɔ afã abien no nyinaa. 11 Afei osusuw ɔpon no ano kwan tɛtrɛtɛ, basafa du, na osusuw ne ntwemu nso basafa dumiɛnsa. 12 Ɔfasu a ɛwɔ awɛmfo mpia no anim no yɛ basafa biako; na ɔfasu no yɛ basafa biako wɔ ɔfã biara. Awɛmfo pia no yɛ basafa asia wɔ benkum na basafa asia wɔ nifa. 13 Afei osusuw ɔpon no fii awɛmfo pia biako atifi kosii biako atifi; ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa aduonu anum,+ na akwan no di nhwɛanim. 14 Osusuw adum no, basafa aduosia, ne adiwo adum no; eyi yɛ adum a ɛwɔ apon a atwa ho ahyia ho no. 15 Efi ɔponkɛse no ano kosi abrannaa no pon ano yɛ basafa aduonum. 16 Ná mfɛnsere a aka apua+ atwa awɛmfo mpia ne adum ne ɔpon no ho nyinaa ahyia, na saa ara na na ɛte wɔ abrannaa no ho. Mfɛnsere wɔ mu nyinaa twa hyia, na wɔayɛ mmedua mfonini+ wɔ adum no ho. 17 Afei ɔde me baa akyi hɔ adiwo hɔ, na mihuu adidibea,+ na na abo nsɛwee atwa adiwo no ho nyinaa ahyia. Ná adidibea aduasa wɔ abo nsɛwee no ho.+ 18 Abo nsɛwee a ɛda apon no ho no te sɛ apon no ntwemu—ɔkwan a ɛda ase no. 19 Na osusuw fii ɔponkɛse no ano kosii mfinimfini hɔ adiwo no anim. Ná ɛyɛ basafa ɔha wɔ apuei ne atifi fam. 20 Akyi hɔ adiwo no wɔ ɔpon bi a ani kyerɛ atifi fam. Osusuw ne ntwemu ne ne tɛtrɛtɛ. 21 Ná awɛmfo mpia abiɛsa wɔ benkum na abiɛsa wɔ nifa. Na ɛho adum ne n’abrannaa nsusuwii te sɛ ɔpon a edi kan no. Ne ntwemu yɛ basafa aduonum na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa aduonu anum. 22 Ne mfɛnsere ne n’abrannaa ne ne mmedua a wɔayɛ wɔ ho no+ nsusuwii te sɛ ɔpon a ani kyerɛ apuei fam no. Wɔfa ntrapoe ason so na ɛkɔ hɔ, na abrannaa wɔ anim. 23 Mfinimfini hɔ adiwo pon no ne ɔpon a ɛwɔ atifi fam ne apuei fam no di nhwɛanim. Na osusuw fii ɔpon biako ano kɔɔ foforo ano, basafa ɔha. 24 Ɔde me baa anafo fam, na mihuu ɔpon bi a ɛkyerɛ anafo,+ na osusuw ɛho adum ne abrannaa no, na na ne nyinaa nsusuwii te sɛ apon no. 25 Ná mfɛnsere atwa ɛne n’abrannaa nyinaa ho ahyia, te sɛ saa mfɛnsere no. Ne ntwemu yɛ basafa aduonum, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa aduonu anum. 26 Wɔforo ntrapoe ason na ɛkɔ hɔ,+ na abrannaa wɔ anim. Wɔayeyɛ mmedua mfonini wɔ n’adum no ho, biako wɔ ha na biako wɔ ha. 27 Mfinimfini hɔ adiwo no wɔ ɔpon a ani kyerɛ anafo fam. Na osusuw fii ɔpon biako ano kɔɔ foforo ano wɔ anafo fam, basafa ɔha. 28 Na ɔde me faa ɔpon a ɛwɔ anafo fam no mu kɔɔ mfinimfini hɔ adiwo hɔ. Na osusuw anafo fam pon no, na na ne nyinaa nsusuwii ne eyinom yɛ pɛ. 29 N’awɛmfo mpia ne ɛho adum ne n’abrannaa no nsusuwii ne eyinom yɛ pɛ, na mfɛnsere atwa ɛne n’abrannaa nyinaa ho nyinaa. Ná ne ntwemu yɛ basafa aduonum, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa aduonu anum.+ 30 Ná abrannaa wɔ ho nyinaa; ne ntwemu yɛ basafa aduonu anum na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa anum. 31 N’abrannaa no anim kyerɛ akyi hɔ adiwo hɔ, na wɔayeyɛ mmedua mfonini wɔ n’adum ho,+ na wɔfa ntrapoe awotwe+ so na ɛkɔ hɔ. 32 Na ɔde me faa apuei fam kɔɔ mfinimfini hɔ adiwo hɔ. Na osusuw pon no, na na ne nyinaa nsusuwii ne eyinom yɛ pɛ. 33 N’awɛmfo mpia ne ɛho adum ne n’abrannaa no nsusuwii ne eyinom yɛ pɛ, na mfɛnsere wɔ ɛne n’abrannaa ho nyinaa. Ne ntwemu yɛ basafa aduonum, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa aduonu anum. 34 N’abrannaa no anim kyerɛ akyi hɔ adiwo hɔ, na wɔayeyɛ mmedua mfonini wɔ n’adum ho wɔ ha ne ha, na wɔfa ntrapoe awotwe so na ɛkɔ hɔ. 35 Na ɔde me baa ɔpon a ɛwɔ atifi fam+ no ano, na osusuwii no, na ne nyinaa nsusuwii ne eyinom yɛ pɛ,+ 36 n’awɛmfo mpia ne ɛho adum ne n’abrannaa no. Ná mfɛnsere wɔ ho nyinaa, na ne ntwemu yɛ basafa aduonum, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa aduonu anum. 37 N’adum anim kyerɛ akyi hɔ adiwo hɔ, na mmedua wɔ n’adum ho wɔ ha ne ha,+ na wɔfa ntrapoe awotwe so na ɛkɔ hɔ. 38 Ná adidibea bi kwan wɔ apon no adum ho. Ɛhɔ na na wɔhohoro nea wɔde bɔ ɔhyew afɔre no ho.+ 39 Ɔponkɛse no abrannaa mu no, na apon abien sisi ɔfã ha na abien nso sisi ɔfã ha. Ɛso na wokum mmoa a wɔde bɔ ɔhyew afɔre+ ne bɔne ho afɔre+ ne asodi afɔre+ no. 40 Ná apon abien sisi akyi hɔ, faako a wɔfa kɔ atifi pon no ano no, na na ɔponkɛse no abrannaa no nkyɛn nso, apon abien sisi hɔ. 41 Ná apon awotwe sisi ɔponkɛse no nkyɛnmu—anan wɔ ɔfã ha, na anan nso wɔ ɔfã ha. Ɛso na na wokum mmoa no. 42 Abo a wɔasen na wɔde yɛɛ apon anan a na wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ so no. Ne ntwemu yɛ basafa biako ne fã, ne tɛtrɛtɛ basafa biako ne fã, na ne tenten basafa biako. Ɛso na na wɔde nneɛma a wɔde kum mmoa a wɔde bɔ ɔhyew afɔre ne afɔre a aka no gu. 43 Ná ade a wɔde nneɛma sensɛn so a ɛte sɛ nsayam tɛtrɛtɛ hyehyɛ dan no ho nyinaa; apon no so na na wɔde aboa a wɔde no ma sɛ ayɛyɛde no nam gu.+ 44 Nnwontofo+ adidibea wɔ ɔponkɛse a ɛwɔ fie no mu no akyi, mfinimfini hɔ adiwo hɔ, atifi pon no nkyɛn, na anim kyerɛ anafo fam. Biako nso wɔ apuei fam pon no ho, na anim kyerɛ atifi fam. 45 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Adidibea a anim kyerɛ anafo fam no yɛ asɔfo a wɔhwɛ fie+ hɔ no dea. 46 Na adidibea a anim kyerɛ atifi fam no yɛ asɔfo a wɔhwɛ afɔremuka+ no so no dea. Wɔn ne Sadok+ mma a wofi Lewi abusua mu a wɔba Yehowa anim bɛsom no no.”+ 47 Na osusuw mfinimfini hɔ adiwo no. Ne ntwemu yɛ basafa ɔha, na ne tɛtrɛtɛ nso yɛ basafa ɔha; ɛyɛ ahinanan. Na afɔremuka no si fie no anim. 48 Ɔde me baa fie no abrannaa+ so, na osusuw abrannaa no dum no, basafa anum wɔ ha, na basafa anum nso wɔ ha. Ná ɔponkɛse no tɛtrɛtɛ yɛ basafa abiɛsa wɔ ɔfã ha, na ɔfã ha nso basafa abiɛsa. 49 Abrannaa no ntwemu yɛ basafa aduonu, na ne tɛtrɛtɛ nso yɛ basafa dubiako. Ntrapoe na wɔforo kɔ hɔ, na adum sisi ntwea adum no ho, biako wɔ ha, na biako nso wɔ ha.+